न्यायसेवाको उपल्लो पद प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो कम्तीमा डेढ दशकसम्म छेकिएकामा न्याय सेवाका कर्मचारी असन्तुष्ट छन् । प्रधानन्यायाधीश बन्ने लाइनमा रहेका न्यायाधीशहरू न्याय सेवा ‘क्याडर’बाट आएका नभएकाले आफूहरूको बाटो छेकिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
जिल्ला अदालत सुनसरीले बलात्कारको आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई सफाइ दिएको छ।
मकालु गाउँपालिकामा निर्माणधीन नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको ड्यामसाइटका मजदुरले सोमबारबाट काम ठप्प पारेका छन्। ज्याला नबढाएको भन्दै करिब २ हजार कामदार आन्दोलित भएका हुन्।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राखेको राजनीतिक प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने कुरालाई एकपछि अर्को गरी प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् । यही विषयलाई लिएर ओलीले आइतबारको स्थायी कमिटी बैठक ‘बहिस्कार’ नै गरेका छन् । र, दाहालको प्रस्ताव फिर्ता नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने पनि सन्देश दिएका छन् ।
जनताका समस्या उठान हुने थलो संसद हो । जनप्रतिनिधिले जनताका समस्यालाई सोझै सरकारसमक्ष पुर्‍याउन संसदमा जनताको बोली बोल्छन् । तर, प्रदेश १ मा कोरोना संक्रमण र निर्माणाधीन संसद भवनलाई कारण देखाउँदै संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउन चासो दिइएको छैन ।
मन्त्री भुसाल भन्छन् - कृषि मन्त्रालय र घरकी कान्छी बुहारी उस्तै
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र प्रभावित भएकोले सबै आयोजनाको म्याद थप गर्न माग गरेको छ।
कोभिडका कारण करिब ६ हजार आयोजना प्रभावित भएकोले सरकारले सबै आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरिदिनुपर्ने माग उठाइएको छ।
सगरमाथाको उचाइ नेपाल र चीनले मंगलबार संयुक्तरुपमा घोषणा गर्दैछन्। पाँच महिनाअघि टुंगो लागेको सगरमाथाको उचाइ चीनबाट अनुमोदन भएपछि मात्र सार्वजनिक गर्न लागिएको हो।
सगरमाथा अब नेपालको मात्र रहेन !
उच्च अदालत पाटनले दुई वर्षअघि राजधानीको दरवारमार्गमा भएको सामूहिक बलात्कारको घटनामा जिल्ला अदालत काठमाण्डौको फैसला सदर गरेको छ ।
मुख्य न्यायाधीश कुमार चुडाल र न्यायाधीश किरण पौडेलको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो ।
दरबारमार्ग सामूहिक बलात्कारको घटनामा जिल्लाकै फैसला सदर
अमेरिकाका विभिन्न अस्पताल तथा विश्वविद्यालयमा १० वर्ष संक्रमण रोग विशेषज्ञका रुपमा काम गरेका डा. सुदीप गुरुङ पछिल्लो समय नेपाल फर्कन चाहन्छन् । आफूले अमेरिकामा हासिल गरेको चिकित्सकीय अनुभव अब नेपालमा नै प्रयोग गर्ने उनको चाहना छ ।
गुरुङजस्ता सैयौँ नेपाली विशेषज्ञहरु, जो विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरेर उतै काम गरिरहेका छन्, कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाल फर्किएर स्वदेशमै सेवा गर्न चाहन्छन् ।
विदेशमा काम गरेका चिकित्सकलाई फर्काउने बाटो सहज बनाइँदै, नेपालमा आएर पुनः परीक्षा दिनुनपर्ने
चीनको औषधि निर्माता कम्पनी सिनोभ्याक बायोटेकलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप उत्पादनमा सघाउन चीन सरकारले झन्डै ५० करोड अमेरिकी डलर थप अनुदान उपलब्ध गराएको छ। सरकारी विवरणअनुसार चीनले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।